မာလီယာ အုိဘားမား (Malia Obama) မွာ ရည္းစားရွိတယ္တဲ့
12 May 2018 . 2:31 PM
အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ဘားရက္ အုိဘားမား (Barack Obama) ရဲ႕ သမီးႀကီးျဖစ္တဲ့ မာလီယာ အုိဘားမား (Malia Obama) ဟာ အခုဆုိရင္ (၁၉) ႏွစ္အရြယ္ ေရာက္လာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဟားဗက္တကၠသုိလ္ (Havard University) မွာ တက္ေရာက္ေနၿပီး အခုခ်ိန္မွာ ခ်စ္သူရည္းစားလည္း ရွိေနပါၿပီ။
‘မာလီယာ အုိဘားမား’ ရဲ႕ရည္းစားဟာ ရုိရီ ဖာက်ဴဟာဆန္ (Rory Farquharson) ျဖစ္ပါတယ္။ သူလည္း (၁၉) ႏွစ္အရြယ္ ရွိပါၿပီ။ အဂၤလန္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ၿပီး ဟားဗတ္တကၠသုိလ္ရဲ႕ ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
HP Spectre 13 အေၾကာင္း အေသးစိတ္သိရွိရန္
အရင္တုန္းက အဂၤလန္ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ‘Rugby School’ မွာ တက္ခဲ့ဖူးၿပီး ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္မွာ ဟားဗတ္တကၠသုိလ္ကုိ ေျပာင္းလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
Malia Obama and Rory Farquharson
‘ရုိရီ ဖာက်ဴဟာဆန္’ ဟာ ေက်ာင္းမွာကတည္းက ရက္ဘီ (Rugby) နဲ႔ ေဂါက္ (Golf) ကစားသမားျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းမွာတုန္းက ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းမွာ လူသိမ်ားသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ဖခင္ဟာ ခ်ားလ္ ဖာက်ဴဟာဆန္ (Charles Farquharson) ျဖစ္ၿပီး Insight Investment Management ကုမၸဏီမွာ ထိပ္ပုိင္းရာထူးတစ္ခုကုိ ထမ္းေဆာင္ေနပါတယ္။
Acer Nitro5အေၾကာင္း အေသးစိတ္သိရွိရန္
မိခင္က စာရင္းကုိင္ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ေက်ာင္တစ္ႏွစ္လခ ေဒၚလာ ၄၇,ဝဝဝ ရွိတဲ့ ‘Rugby School’ မွာ တက္ခဲ့တဲ့အတြက္ အေတာ္အသင့္ေခ်ာင္လည္တဲ့ မိသားစုလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။
၂ဝ၁၇ခုႏွစ္တုန္းက ေရးလ္တကၠသိုလ္နဲ႔ ဟားဗတ္တကၠသုိလ္တုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတဲ့ ေဘာလုံးပြဲမွာ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး နမ္းရႈံ႕ေနၾကတဲ့ ပုံရိပ္ေတြ လူမႈကြန္ရက္မွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ နာမည္ေက်ာ္သြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ‘ဘားရက္ အုိဘားမား’ နဲ႔ မစ္ရွယ္ အုိဘားမား (Michelle Obama) တုိ႔က သမီးျဖစ္သူ ရည္းစားထားေနတာ သိေပမယ့္ သူမကုိ ယုံၾကည္တဲ့အတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္တာမ်ိဳး မရွိခဲ့ပါဘူး။ ‘ရုိရီ ဖာက်ဴဟာဆန္’ ဟာ ဘဏ္လုပ္ငန္းနဲ႔ အသက္ေမြးလုိသူျဖစ္ၿပီး ဘဝကုိ ေပါ့ေပါ့းပါးပါး ျဖတ္သန္းလုိသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လတုန္းက ခ်စ္သူႏွစ္ဦးဟာ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ ေလ်ွာက္လည္ခဲ့ၾကပါေသးတယ္။
မာလီယာ အိုဘားမား (Malia Obama) မှာ ရည်းစားရှိတယ်တဲ့
အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဘားရက် အိုဘားမား (Barack Obama) ရဲ့ သမီးကြီးဖြစ်တဲ့ မာလီယာ အိုဘားမား (Malia Obama) ဟာ အခုဆိုရင် (၁၉) နှစ်အရွယ် ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဟားဗက်တက္ကသိုလ် (Havard University) မှာ တက်ရောက်နေပြီး အခုချိန်မှာ ချစ်သူရည်းစားလည်း ရှိနေပါပြီ။
‘မာလီယာ အိုဘားမား’ ရဲ့ရည်းစားဟာ ရိုရီ ဖာကျူဟာဆန် (Rory Farquharson) ဖြစ်ပါတယ်။ သူလည်း (၁၉) နှစ်အရွယ် ရှိပါပြီ။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
HP Spectre 13 အကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိရန်
အရင်တုန်းက အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ‘Rugby School’ မှာ တက်ခဲ့ဖူးပြီး ၂ဝ၁၇ခုနှစ်မှာ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ကို ပြောင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
‘ရိုရီ ဖာကျူဟာဆန်’ ဟာ ကျောင်းမှာကတည်းက ရက်ဘီ (Rugby) နဲ့ ဂေါက် (Golf) ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းမှာတုန်းက ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ခဲ့ပြီး ကျောင်းမှာ လူသိများသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာ ချားလ် ဖာကျူဟာဆန် (Charles Farquharson) ဖြစ်ပြီး Insight Investment Management ကုမ္ပဏီမှာ ထိပ်ပိုင်းရာထူးတစ်ခုကို ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။
Acer Nitro5အကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိရန်
မိခင်က စာရင်းကိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ကျောင်တစ်နှစ်လခ ဒေါ်လာ ၄၇,ဝဝဝ ရှိတဲ့ ‘Rugby School’ မှာ တက်ခဲ့တဲ့အတွက် အတော်အသင့်ချောင်လည်တဲ့ မိသားစုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
၂ဝ၁၇ခုနှစ်တုန်းက ရေးလ်တက္ကသိုလ်နဲ့ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်တို့ ယှဉ်ပြိုင်ကြတဲ့ ဘောလုံးပွဲမှာ ချစ်သူနှစ်ဦး နမ်းရှုံ့နေကြတဲ့ ပုံရိပ်တွေ လူမှုကွန်ရက်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ နာမည်ကျော်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ‘ဘားရက် အိုဘားမား’ နဲ့ မစ်ရှယ် အိုဘားမား (Michelle Obama) တို့က သမီးဖြစ်သူ ရည်းစားထားနေတာ သိပေမယ့် သူမကို ယုံကြည်တဲ့အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်တာမျိုး မရှိခဲ့ပါဘူး။ ‘ရိုရီ ဖာကျူဟာဆန်’ ဟာ ဘဏ်လုပ်ငန်းနဲ့ အသက်မွေးလိုသူဖြစ်ပြီး ဘဝကို ပေါ့ပေါ့းပါးပါး ဖြတ်သန်းလိုသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းက ချစ်သူနှစ်ဦးဟာ နယူးယောက်မြို့မှာ လျှောက်လည်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။
နာမည်ကြီးသော “No Plastic” Campaign လှူပ်ရှားမှူများ
by Moethae Say .3hours ago
realme နဲ့ ပူးပေါင်းလက်တွဲသွားမယ့် အကယ်ဒမီများဆုရှင် သက်မွန်မြင့်
by 2B . 17 hours ago
စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေကို အသုံးဝင်အောင် ပြန်လုပ်ဆောင်ကြမယ်
by Moethae Say . 1 week ago
နေ့စဉ်ဘဝမှာ ပလတ်စတစ်အသုံးပြုမှု လျော့ကျအောင် ဘယ်လိုနေထိုင်ကြမလဲ
လက်တွေ့ဘဝမှာ ပလတ်စတစ်တွေကိုဘယ်လိုပစ္စည်းတွေနဲ့ ပြန်အစားထိုးမလဲ
ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်ဖို့ ပလတ်စတစ်ကို ငြင်းဆန်နေကြတဲ့ နာမည်ကြီးလုပ်ငန်းများ